नयाँ कामुक कथाहरू
एरोटिका मुख्यधारको साहित्य हुन थालेको छ। यो धेरै प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध छ, फिफ्टी शेड्स अफ ग्रे जस्ता पुस्तकहरू सहित! यति धेरै एक्सएक्सएक्सस्टोरी साइटहरूको साथ, ती सबैले कहानी कथाहरू र हामीले गर्न सक्ने श्रेणीहरूको दायराको समान गुण प्रदान गर्दैन। तातो पत्नीको सेक्स कथाहरूदेखि तातो समलि .्गी यौन कथाहरू सम्म, हामीले तपाईंको मनपर्ने सबै थियौं। यदि तपाईं अद्वितीय केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, सम्भावनाहरू यो हुन् कि तपाईंले यो यहाँ पाउनुहुनेछ, वा तपाईं आफैले यसलाई लेख्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ!
तातो सेक्स छोटो कथाहरू। एरोटिका सधैं उपन्यास हुनु हुँदैन। हाम्रो साइटमा तपाईंको कल्पनाहरू मिलाउन सयौं छोटो कामुक कथाहरू छन्!
फोहोर कथाहरू। के तपाईंले फोहोर कल्पनाहरू पाउनुभयो? हामी निश्चित रूपमा dirtier छौं। केहि तातो गन्दा यौन कथाहरू जाँच गर्नुहोस्!
हट अश्लील कथाहरू क्लासिक छन्। यदि तपाईं यहाँ हेरिरहनु भएको छ भने, तब हामीसँग छनौट गर्न सयौं परिपक्व कथाहरू छन्।
तपाईंको कल्पनालाई न्यानो पार्नुहोस्। वासना र जोश को वातावरण मा डुबाउनुहोस्। तपाईको कल्पनालाई जगाउन सयौं स्थितिजन्य यौन कथाहरू अन्वेषण गर्नुहोस्। बिभिन्न विधाको माध्यमबाट हेर्नुहोस्, कथालाई खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ र मजा लिनुहोस्। अधिक खोज्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्। हरेक दिन नयाँ यौन कथाहरू अन्वेषण गर्नुहोस्।
लेखकहरूसँग च्याट गर्नुहोस्। यदि फिक्शनले यो तपाईंको लागि गर्दैन भने, त्यसो भए तपाईं जहिले पनि हाम्रो साइटमा वास्तविक तातो यौन कथाहरू लेख्ने तातो केटीहरूसँग भिडियो च्याट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो साइटमा इरोटिका पछाडि वास्तविक व्यक्तिहरू छन्, र संभावनाहरू जुन तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ वास्तविक जीवनमा भयो। थप विज्ञहरू र थप रमाईलो प्राप्त गर्न तपाई विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
कामुक छोटो कथा
तातो परिपक्व कथाहरू पढ्नको लागि सदस्यता लिनुहोस्। हामी नि: शुल्क वर्जित यौन कथाहरूको विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछौं। तपाईं प्रत्येक कोटी र लेखन शैली कल्पना मिल्नुहुनेछ। यदि तपाईं केहि बढि खोज्दै हुनुहुन्छ, केहि गाह्रो चीज, र तातो, तब तपाईंलाई पक्कै सदस्यता चाहिन्छ। जे भए पनि यो नि: शुल्क सदस्यता हो, साईन अप गर्दा तपाईलाई सब भन्दा कडा पहुँच गर्न दिन्छ, हरेक कल्पनालाई शब्दमा राखिन्छ।
नि: शुल्क यौन कथाहरू
लेखकहरूलाई सुझाव दिनुहोस् र उनीहरूलाई अधिक xxx कामुक कथा लेख्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। के तपाईंलाई कुनै विशेष लेखकको काम मन पर्छ? उनीहरू बढि पोस्टिंग गरिरहन चाहन्छन् वा केवल उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् तपाईको कार्यको कत्तिको कदर गर्नुहुन्छ? तपाईं तिनीहरूलाई सँधै एक निजी सन्देश पठाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई सूचित गर्न! थप रूपमा, तपाईं तिनीहरूको कार्य कतिको मन पराउनुभयो भनेर देखाउन एउटा टिप वा उपहार छोड्न सक्नुहुन्छ। यो उनीहरूलाई सुपर तातो सेक्सी कथाहरू लेख्नको लागि हौसला मिल्नेछ!
प्रयोगका सर्तहरू गोपनीयता नीति समर्थन अनैतिक यौन कथाहरू